Faucet avo lenta ao an-dakozia voasoritra nikela hisintona
Home / Fitaovana an-dakozia / Misintona Faucets ao an-dakozia / WOWOW Top Rated Misintona Down Faucets ao an-dakozia
FIVORIANA VOAFANA FAMPIAM-PIVAROTANA AINGA TOKO ANY ANAO
naoty 4.98 avy tany 5 mifototra amin'ny 41 mpanjifa naoty
(41 mpanjifa famerenana)
Ity Fitaovana an-dakozia ity dia vita amin'ny varahina tsara fanao ary manasa lamba. Ny SUS304 dia marefo sy salama, ary miankina amin'ny mpiambina antsika ny fahasalamantsika. Afaka namboarina amin'ny fihodinana mafana sy mangatsiaka izy io, mora soloina, mora apetraka, mahazatra ary kanto, ary mety tsara amin'ny alàlan'ny efitrano fandroana sy lakozia samihafa.
Esory ny boos de klères vita amin'ny 2310301
Ny fisafidianana takelaky ny lakozia an-dakozia, iray amin'ireo singa manan-danja indrindra dia ny fahasalamana sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Gripeo an-dakozia tsy vita amina fitaovana matevina sy avo lenta, mety hisy fiantraikany amin'ny fahasalamanao noho ny sisa amin'ny poizina izay mifangaro amin'ny rano fisotro. Ny sakamalaho milentika ao anaty lakozia an'ny WOWOW dia vita amin'ny vatosoa voahosotra sy fitaovana avo lenta. Miaraka amin'ireo singa tsy asehon-doko, ireo faucine milina any an-dakozia dia manolotra anao ny vola tsara indrindra amin'ny vola arakaraka ny kalitao, ny faharetana ary ny fanoherana. Ny fantsom-bolam-pandavam-bolan-tsifatra avo lenta amin'ireny horonana milentika any an-dakozia ireny dia afaka maharitra 500,000 farafahakeliny fihodinana feno rano. Mihoatra ny fenitry ny indostria izany. Ambonin'ny zava-drehetra, atsofohy ny tavoahangy an-dakozia WOWOW mitahiry rano noho ny lohany manobaka azy. Azo antoka fa ho voamarikao amin'ny volanao ny volanao!
Ankoatry ny fahasalamana, ny fiasan'ireo andian-jiro any an-dakozia dia samy hafa. Ny multi-functionalsprayer dia azo ampiasaina amin'ny maoderina roa: renirano sarotra rehefa mameno rano ao anaty panina ianao ohatra, ary famafazana fanafanana amin'ny fanadiovana lovia ohatra. Ny kiraro tokana ao an-dakozia dia manamora ny fanitsiana ny habetsaky ny rano sy ny mari-pana. Amin'ny lafiny iray, ny spond ny swivel dia afaka mamadika ny 360 degre hahazoana fiononana farany. Ary farany nefa tsy ny kely indrindra, ny faucet le-lever an'ny blinkt dia ahitana ny hosotra hisintona 1.5 m hametrahana anao amin'ny faritra fanasana lehibe kokoa 80 cm. Mahasoa indrindra izany rehefa manana dobera an-dakozia roa ianao, fa miaraka amin'ny lakolosina tokana koa dia mety ho mora hamitana ireo faucets an'ny WOWOW. Tsy misy tokan-trano iray na manodidina ny lakandrano ao an-dakozia tsy azo aatrehana miaraka amin'ireo faucets booratry ny WOWOW.
Mahatsiro kirihitra milentika ao anaty lakozia
Ankoatra ny fahasalamana sy ny fiasa, mazava ho azy, dia te-hanintona faucets milentika koa ianao. Ny fauche an-dakozia dia tsy maintsy manangana firaisana iray mampiray amin'ny famolavolana an-dakozia manontolo. Misy olona manamaivana ny fiantraikan'ny faucets an-dakozia. Rehefa misy olona miditra amin'ny lakozia, ny sainy dia manintona ho azy haingana amin'ny faucets an-dakozia. Na dia kely aza ny faucets an-dakozia, misy fiantraikany goavana amin'ny fandavan'ny herinao ao an-dakozia. Vokatr'izany dia tena zava-dehibe ny fisafidianana am-pahendrena ny gripeôte any an-dakozia, satria afaka manome fampivoarana lehibe anao izy io. Ireo andian-tsolika nikorotsaka be ity dia afaka manome anao ity fiakarana ity raha tsy misy fisalasalana.
Manintona voankazo maloto any an-dakozia dia manolotra tombony betsaka amin'ireo karazana fatana an-dakozia. Noho ny hosotra rano azo averina, azonao atao ny manitatra moramora any anaty lakozia mora anao. Amin'ity endri-javatra tsotra ity, azonao tratrarina saika any amin'ny toerana rehetra na ao akaikin'ny lakozian'ny lakoziazinao. Ary na izany aza, ny sokitra dia ampidirina ao anaty faucet any an-dakozia ao anaty lakozia, ka tsy hahita hosoka rano ianao raha tsy mampiasa ny boatinao milentika any anaty bozonao. Ny toe-piainana tokana dia ny manana rafitra fanalana avo lenta. Tsy fahafaham-po tanteraka ny tokony handraika ny faucet any an-dakozia izay tsy hisintona ny hosotro ny rano. Tsy maintsy miasa 100% tsara mba hanome fampiononana ambony indrindra ianao.
Amboary ny lakoziao miaraka amin'ireto faucet bozomainty ireto
Ny fantsom-baravarankara milentika ao an-dakozia WOWOW dia manamora ny fiainanao. Ny famolavolana baolina gravitika kilasika amin'ireo faucet an-dakozia an-dakozia ireo dia manalalaka tanteraka ny famoahana sy famoahana ny fantson-drano. Ny bala misintona dia misintona ny sprayer ho azy, noho izany tsy mila miezaka mafy mihitsy ianao rehefa vita ny manasa ny fatana an-dakozinao. fomba sy fampiasa. Araka ny voalaza, ny fantsom-pandehanana an-dakozia an-dakozia WOWOW dia manolotra asa rano 2: mikoriana sy manondraka. Ireo fiasa roa ireo dia ahafahanao miovaova mora foana sy ara-dalàna avy amin'ny spray mankany amin'ny stream na ny mifamadika amin'izany. Azonao atao izany amin'ny alàlan'ny fivezivezena tsotra amin'ny rantsantanana nefa tsy mila manakana ny rano aloha. Milamina ny bokotra ary manome fiononana faran'izay betsaka.
Ny vidiny mora azon'ny tafo any an-dakozia
Tonga amin'ny vidiny ny kalitao, fa tsy amin'ny WOWOW. WOWOW dia nahavita hanome anao faucet amin'ny lakandrano avo lenta izay mbola azo atao. Noho ny fahazoana fitaovana sy ny fizotran'ny famokarana avo lenta, ny WOWOW dia afaka manolotra anao misintona faucets milina any an-dakozia izay afaka mifaninana amin'ny boaty milentika A-marika A-marika, ary na dia ampahany kely amin'ireto vidiny ireto aza. Noho izany dia matoky izahay miteny fa tsy hahita kapila mandilika any an-dakozia ianao amin'ny vidiny tsara kokoa noho ny WOWOW. Vokatr'izany, ny WOWOW dia manolotra anao ny salan'isa vidiny tsara indrindra izay ahitanao eo amin'ny tsena.
Tsy misy na inona na inona omen'i WOWOW vola 90 andro hiverenany amin'ny boaty milentika any an-dakozia. Rehefa mieritreritra ianao fa ny fantsom-bolo any an-dakozia dia tsy ilay nantenainay dia hamerina anao izahay raha tsy misy olana na fanontaniana. Tsotra ihany. Mijoro ho an'ny vokatrao izahay ary resy lahatra izahay fa manolotra ny tampon-lakana tafo any an-dakozia. Noho izany dia fantatray fa tsy ho diso fanantenana ianao ary ho gaga miaraka amin'ny fauceta bozonao vaovao. Manana mpanjifa maro miverina avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao izahay, ary azontsika antoka fa hisafidy anay amin'ny manaraka koa ianao.
Azo antoka ny fametrahana
Mora napetraka noho ny entona mora azy ny mora manintona ny lakozia any an-dakozia. Afaka mametaka ity fauceta ity amin'ny dingana iray fotsiny ianao. Noho izany dia azonao atao ny mametraka ny boaty milentika ao an-dakozia. Tsy mila manakarena matihanina lafo ianao mba hahafahanao manangona vola be. Ny kirihitr'akanjon'ny WOWOW dia misy takelaka deck, baolina iray gravity, andiana rano mafana sy mangatsiaka ary karazana kojakoja mipetaka. Ity andalana feno ity dia manome antoka ny fametrahana mahomby sy haingana. Mora ohatran'izany!
Ny tombony azo avy amin'ny lakandrano hilentika ao anaty lakozia amin'ny fomba fohy
· Manome trotraka any an-dakozia ianao
· Nasiaka nikela volotsangana
· Manintona hidro ny rano avo lenta
· Tima-tanana tokana mampitony
· Roa ny rano
· Vita amin'ny fitaovana varahina avo lenta
· Mora manadio sy mora ampiasaina
· Garantiana 5 taona
SKU: 2310301 Sokajy: Fitaovana an-dakozia, Misintona Faucets ao an-dakozia Tags: Nickel nopotehina, Misintona midina, Single Hole
21.46 X 11.22 X 2.56 santimetatra
1 na 3 Hole Deck Mount
Dual Mode: Mode Spray / Mode Stream
Havia / Marina / Center
Tendrombohitra tokana tokana
Fanaraha-maso ny mari-pana amin'ny rano
Rano / trano anatiny / varotra / trano fisakafoanana / trano / fandroana 1or2
Faucet milentika ao an-dakozia; Hosana rano mafana sy mangatsiaka 50cm; Sintomy ny sprayer; Takelaka fanaovana takelaka; Fitaovana fametahana
*** B E2020-05-01
Nosoloinay faucet an-dakozia taloha ity ary tsy ho faly intsony aho! Tena nahagaga ny vadiko ny nanokatra ilay boaty. Nahita ilay faucet fonosina amin'ny foam izy ary tsy nanelingelina azy nandritra ny fandefasana azy. Ny zavatra nahaliana azy manaraka dia ny torolàlana momba ny fametrahana izay mazava sy fohy. Ny olana mety hitranga dia ny adiresin'ny mpanamboatra ity vokatra ity. Manomboka amin'ny làlana mankany amin'ireo adaptatera sy mpanasa lamba izay nampidirina tao. Mora ny fametrahana ary nandeha voalohany ny faucet.
Misy vazivazy mihazakazaka eo amintsika fa izay tetik'asa raisintsika izay tokony haharitra adiny iray na roa; haharitra 2 andro isika. Tsy ity iray ity no nanana olana bebe kokoa tamin'ny fanesorana ny faucet taloha raha oharina amin'ny adiny 1/2 aorin'ity kely ity!
Fantsona tena tsara, indrindra raha be ny olona maniry vola be. Niraikitra tamin'ny faucet plastika / aluminium izahay rehefa nifindra tao amin'ilay trano vaovao. Nivoaka avy teo amin'ny paompy izany ary nandany rano izahay. Fanatsarana lehibe ho an'ny hira ity. Nosoloinay ihany koa ny kojakojam-pandrefesana satria tafaporitsaka hatrany izany. Raha esorinao ity tetik'asa ity dia hoy aho hoe alao ity aloha ary manery ny tenanao hamita azy. Tsy ho diso fanantenana ianao.
Tsy tiako ny tetikasa fantson-drano. Mampalahelo fa tsy maintsy nametraka faucet betsaka kokoa aho (Moen, Delta, Pfister) fa tsy tadidiko akory. Ity WOWOW ity no mora indrindra vitako hatramin'izay. Raha tokony hamehezana azy ao anaty lavaka amin'ny alàlan'ny tadin'ny tendany lalina omen'ny marika hafa izy io dia mampiasa visy vita amin'ny volo izay mora kokoa kokoa rehefa tafiditra ao anaty kabinetran'ny zava-poana misy hazavana sy toerana voafetra ianao. Ny tsipika famatsiana mafana sy mangatsiaka dia voamarika mazava amin'ny alàlan'ny kaody fandokoana, ary koa ny teny mafana sy mangatsiaka. Ho toy ny bonus fanampiny dia tonga tamin'ny adaptatera 3/8 ″ hatramin'ny 1/2 which izay nila nampifandraisiko tamin'ny valizy shutoff. Namonjy ahy nankany amin'ny fivarotana fitaovana io. Io no faucet tsara indrindra apetraka hatramin'izay.
Nivarotra fantsona vetivety aho faucet ary nieritreritra fa hanandrana an'ity iray ity aho satria ara-toekarena kokoa noho ny hafa hitako. Mazava ho azy fa somary natahotra aho satria tsy anarana be io ary somary voalamina tsara handeha miaraka amin'ireo anarana lehibe isika. Tena mandeha tsara izy io ary na izaho aza afaka nametraka azy ary izany dia milaza zavatra betsaka (matotra!). Tsy dia nazava tamiko ny torolalana saingy io no andrana voalohany nataoko tamin'izay toa izao (misaotra an'i google sy youtube)! Tsy maintsy nividy mpampitohy fanitarana famatsian-drano hahatratra ny famatsian-drano aho satria ny faucet taloha dia nanana ny tsipika varahina mafy nidina avy tao ary ity dia efa misy ifandraisany ireo tsipika famatsiana. Ny fanitarana dia latsaky ny $ 10 tao amin'ny magazay fivarotana fitaovana lehibe. Tiako ity iray ity satria mifangaro tsara kokoa ihany koa amin'ny fantson-dakoziko mahazatra satria tsy dia mamirapiratra izany nefa toa vaovao sy madio ihany. Fifangaroana tsara amin'ny fanavaozana izany nefa tsy manja loatra. Afaka mandeha mora kokoa amin'ny vilany lehibe aho, nefa, ny faucet dia tsy dia lehibe loatra ka tsy hita eo amin'ny lakozia keliko. Milomano tsara / milamina, spray / stream tsara, mora mifamadika. Lafo, sandany lehibe. Manoro hevitra mafy aho. (Tsy voaloa ara-bola mihitsy aho tamin'ity fanavaozana ity ary tsy misy ifandraisany amin'ny orinasa. Matetika aho no miahiahy kely momba ny fandikan-dalàna.)
Noho ny vola dia tsy maharesy ity faucet ity ianao! Izy io dia manana endri-javatra izay misy faucets lafo kokoa. Ny dingana iray manontolo dia mora apetraka. Tiako ny peratra fametahana peratra sy visy hametahana ny faucet hilentika. Ny hosesy dia misy marika avokoa ary toa adidy mavesatra izany. Raha vao apetaho ny lanjany dia mivoaka mora be ilay spray ary miverina toy ny tokony ho izy. Ny hany fihemorana miasa hitako dia ny bokotra amin'ny famafazana. Izy io dia manana bokotra karazana toggle izay hiova eo anelanelan'ny renirano mahazatra, ny famafazana ary ny fitambarana famafazana sy fantsona. Ity switch ity dia karazana floppy ary saika hivadika ho antsasaky ny spray sy ny mode stream fotsiny amin'ny fikasihana ilay sprayer. Ny fotoana dia hitantara ny fihazonana an'ity bokotra ity. Izaho dia manoro ity faucet ity!
Nividy ity faucet ity ho an'ny zanako lahy sy ny vinantovaviko ho fanomezana an-trano aho. Nanana faucet chrome taloha izy ireo ary tsy nasiana sprayer (ary tsy manana mpanasa vilia koa izy ireo). Nanafatra ny maodely alimo b / c aho tamin'ny voalohany, nieritreritra aho fa hifanaraka amin'izay efa ananan'izy ireo. Nanapa-kevitra izy ireo fa tena nila ny mainty, fa naveriko tao amin'ny fivarotana Kohl teo an-toerana (mora be izany!) Ary nandidy ilay mainty aho. Avelao aho hiteny aminao - ity faucet ity no baomba! Mahafinaritra ny tsindry rano ary miasa tsara kokoa ny sprayer raha oharina amin'ny zavatra hafa nampiasako hatrizay, ary tsy resahiko akory ny hatsarany. Natahotra kely aho ny hanafatra anarana marika mbola tsy henoko mihitsy, fa kosa hanome an'ity marika ity ho an'izay mitady faucet matevina nefa tsy lafo. Asa be WOWOW !!!
B *** ny2020-05-26
Manana trano Model Park izahay ao amin'ny toeram-pialan-tsasatra any Florida miaraka amina servisy roa kely. Ny faucet ambany nanananay dia olana foana raha te hanasa zavatra lehibe izahay. Miasa tanteraka ity faucet ity.
Telo no nasiako kintana tamin'ny fametrahana satria ny fototry ny faucet dia somary lehibe kokoa noho ny loaka tao anaty lozika tsy misy fangarony. Tsy maintsy nametraka azy io aho mba hanitarana ny lavaka. Tsy azoko antoka raha kely kokoa noho ny mahazatra ny lavaka ao amin'ny fitoeranay, na raha savaivony lehibe ny savaivon'ny faucet. Raha vantany vao napetraka aho dia tian'ny vadiko izany. Izay no zava-dehibe !!! Right ??
Tiako ny faucet vaovao! Niady hevitra aho raha toa ka fomba iray “azo antoka” kokoa ny fividianana iray avo roa heny amin'ny vidin'ny Home Depot eo an-toerana, saingy efa iray volana teo ho eo izao no nananako an'io ary tiako ilay izy. Tsara kalitao izy io ary mitovy amin'ny faucet (lafo kokoa, namebrand) teo aloha ihany.
J *** f2020-06-04
Nividy trano vaovao aho tamin'ny iray lasa izay ary nametraka faucets ambany ny mpanorina. Faly be aho amin'ny fomba fijery sy fampisehoana an'ity faucet ity. Hilaza aho fa ny hany fitarainako kely dia ny hoe mivoaka mahery ny rano, saingy zatra manana fikitika maivana kokoa aho rehefa mampandeha azy. Mora ny mifamadika amin'ny renirano mankany amin'ny spray, mbola tsy nampiasa ny bokotra fiatoana kely akory aho na dia mandeha tsara aza. Izaho dia nametraka azy io tamina olona mahay ary tsy nanana olana tamin'ny fametrahana azy izy. Sarobidy lehibe raha oharina amin'ny Home Depot na Lowe's satria tsy misy na inona na inona ao amin'io elanelam-bidiny io.
Manome kintana 5 aho hatreto. Vao iray herinandro teo ho eo isika no nanana an'io ary tiako hatreto. Tena mora ny nametraka ary ny vita mainty matte dia mandeha tsara miaraka amin'ny countertops granite. Tao anatin'ny fotoana fohy nananantsika dia efa nanatanteraka ny faucet farany novidintsika latsaky ny 1 taona lasa izay. Ny mpivarotra dia tsy hahomby amin'ny vokatra vokariny. Izaho dia nitady nandritra ny fotoana fohy ary ity iray ity toa ny tsara indrindra amin'ny vidiny ary toa nisy fanamarihana marina tsara. Tahaka ny nolazaiko fa vao herinandro vitsivitsy monja izao indrindra fa hanavao taty aoriana ary manantena fa tatitra tsara izany!
Ity faucet ity dia tokony ho tsiambaratelo lehibe indrindra eto an-tany. Miakatra tsara izy, miseho tsara, mandeha tsara ary lafo ny vidiny. Nosoloinay ny fako plastika ao amin'ny RV anay ary tian'ny vadinay izany. Io dia hiasa tsara amin'ny trano iray ihany koa.
Tsara be ity faucet ity !! Vehivavy 22 taona aho izay tsy maintsy nanova ny faucet nataoko tao amin'ny efitranoko satria vaky ilay teo aloha. Tsy manana traikefa amin'ny fanovana faucet aho na karazana fantsom-panafody, saingy mora be ny nametraka azy. Nijery ilay horonan-tsary 1 minitra tao amin'ny Youtube tamin'ny fomba fametrahana ity faucet ity aho ary nahavita izany tao anatin'ny 20 minitra. Izy io dia miaraka amin'ny torolàlana, saingy hitako fa mora kokoa ny manakatra sy manaraka an'ity video ity. Rehefa napetraka izy io, dia matanjaka be tsy misy fivoahan'ny rano ary prefektiora ny rano. Ampirisiho fatratra ity faucet ity!
Tena faly amin'ity faucet ity aho. Vidy lafo tokoa izany ka voatery nanandrana aho. Ny mpitifitra rano dia mihemotra tsara fa tsy manindry azy fotsiny ianao. Saingy tiako fa azonao ovaina izy io avy amin'ny spray feno mankany amin'ny spray spray ary rehefa apetakao dia manana safidy ianao hahazoana antoka fa manana famafana ny tananao mba tsy hidona amin'ny varavarankely na backsplash anao. Afaka nanodina ny fotony izahay ka rehefa mampiasa ny tahony aho dia tsy hidona amin'ny varavarankeliko mihitsy izany. Manovaova sy mora!
Oay! Ity dia tsara kokoa / mora apetraka noho ny noeritreretiko. Mahagaga tokoa, ny fizotran'ny fametrahana dia adiny iray 1/2 teo ho eo. Raha tsy matahotra mando ianao mety ho maloto ao ambanin'ilay filentehana, vehivavy afaka manao izany. Tehirizo amin'ny fandoavam-bola matihanina ny volanao. Mametraha lamba firakotra taloha, makà fotoana amin'ny torolalana mety ilainao menaka famafazana hanafaka ny sasany amin'ny fihazonana mafy. Na izany aza, ny kalitaon'ity faucet ity dia mendrika ny fotoanao sy ny volanao. Faly aho amin'ny safidiko.
T *** ny2020-06-19
Ny ampahany sarotra indrindra tamin'ny fizotrany rehetra dia ny fanesorana ireo faucet ao an-dakozia taloha. Nisy voanjo kely dia kely nendahana. Tsy maintsy nampiasa wrench basin aho hanesorana azy. Mino aho fa iza no nametraka an'io faucet io nampiasa fitaovana diso hanamafisana ilay bolt. Tamin'ity faucet ity dia nanadio mpanasa lamba lehibe toy ny voanjo tamin'ny tanako aho araka izay tratrako, ary avy eo namboariko tamin'ny fametahana visy telo tamin'ny mpamily visy. Misy torolàlana hanehoana tsara ny fomba fanaovana azy.
*** B E2020-06-21
Ka tamin'ny naha mpivarotra ahy dia tena nisalasala aho rehefa nisafidy ity faucet ity ny vadiko mba hapetraka ao an-dakozianay satria ny iray mbola tsy henoko mihitsy momba ilay marika ary ny roa dia ambanin'ny $ 75 izay midika fa soloinao ao anatin'ny roa herinandro. Saingy tsy nitovy io faucet io fa natao mateza mafy ary tsara lavitra noho ny faucet efa nataoko na napetrako tao anatin'ny dimy ambin'ny folo taona niarahako tamin'ny varotra fantson-drano dia hividy an'ity marika ity indray hanandramana ireo faucet hafa
Tiako ity faucet ity. Tsara tarehy sy miasa izy io. Mahafinaritra ny manao lovia sy mahandro sakafo nefa koa manome rano mafana sy manondraka ny zavamaniry ho ahy. Tena faly tamin'ity faucet ity aho. Tsara ny mpivarotra ary tonga ara-potoana sy tamina toe-javatra tsara ilay entana. Tena hividy amin'ity mpivarotra ity indray aho.
V *** S2020-06-29
Hatreto dia vita araka ny noeritreretiko hatao fotsiny. Tsy misy fivoahana, ary tsy misy fahavoazana aorian'ny famelezana azy tamin'ny vilany tsy nahy fa volana vitsy monja no nahazoako azy, noho izany tsy fitsapana fampijaliana tanteraka izany.
Tsy dia nisy dikany ny fametrahana, ny faucet dia karazana manelingelina foana ny fametrahana azy satria voafetra ny fidirana, fa raha ampitahaina amin'ireo volavola taloha miaraka amina janky fittings mila wrench lehibe amin'ny toerana kely dia mora kokoa ity. Afaka nametraka an'ity aho raha tsy nisy tanana roa.
Izaho dia nametraka an'ity faucet ity tamin'ny alàlan'ny handiman ka tsy afaka maneho hevitra momba ny fametahana azy fa afaka milaza aho fa tsara sy mandeha tsara. Mora ny mifamadika eo amin'ny spray sy stream. Ny bokotra fiatoana dia mandeha tsara, toy izany koa ny fisintomana. Nanana faucet ambany sy mahitsy aho taloha ary nofinofy tanteraka izany. Zavatra iray tiako indrindra ny ahafahanao mameno mora foana ireo kaontenera lava. Toa classy sy maoderina io ary manana famaranana kanto. Hanoro hevitra ity faucet ity aho.
Vao avy nametraka an'io ary mahafinaritra be. Sambany aho nisolo faucet irery ary elaela aho vao namoaka ilay taloha dia avy eo nametraka ilay vaovao. Raha vantany vao navoakako ilay taloha, dia latsaky ny 8 minitra vao nametraka ity vaovao ity aho ary nandalo ny rano nandalo azy. Izy io dia manana fijanonana mijanona tsara eo an-doha ka tsy mila manatratra ny famonoana ny rano ianao raha mila misintona ny lohanao eo ambonin'ny latabatra na zavatra hafa.
Ilay singa no tadiaviko hisolo ny faucet ao an-dakozia taloha. Izy io dia vokatra sarobidy lehibe raha oharina amin'ny marika hafa, tsy misy afa-tsy ireo marika voalaza. Fijery tsara, voaorina tsara ary fametrahana dia mora be. Maniry aho fa hanana ny safidin'ny lohany tsy misy fikitihana izy ireo. Nividy iray aho hisolo ny sprayer ary tiako ilay izy. Tena mety. Heveriko fa matotra tokoa ity karazana endrika ity ary na dia tsy marika marika aza izy io dia tokony handeha tsara. Manoro izany aho.
Tiako izy izany! Toa manan-danja sy vita tsara. Fanavaozana lehibe io tamin'ny zavatra nananako teo aloha. Tena tiako ny fomba mora ahodinodinodiny sy ny fiverenan'ny sprayer amin'ny toerana saika ho azy. Vidio tsara raha ampitahaina amin'ireo magazay boaty izay amidy an'arivony dolara na mihoatra. Satria mora vidy tokoa izany dia afaka nanam-bola handyman hametraka azy aho. Raha tsy izany dia ho teo ambanin'ny fantsakana nandritra ny ora maro aho! Tpt.
Nanomboka nihetsiketsika ny faucet an'i Neny ary tsy te hiatrika ny fanovana ilay mpanasa lamba sy izany rehetra izany. Azonao ity iray ity ary nosoloina afaka 30 minitra. Naharitra 20 minitra vao namoaka ilay taloha, yike. Hatreto dia efa telo volana ary mbola mandeha tsara. Nametraka tsy nisy lovia tamin'ny lavaka iray aho ary toa IMO tsara. Ny hany tokana dia manana mpampitohy rano 3/8 ″ vaovao izy ary ny ankamaroan'ny valves taloha dia 1/2 ″ ka tandremo izany. Raha tsy izany, vidiny lafo sy vokatra lehibe.
Tsara ity faucet ity. Nividy azy io ho an'ny fitoeram-panasan-damba izahay, hanoloana faucet izay lafo 3 heny nefa naharitra taona vitsivitsy. Mora be ny nametraka azy ary tena tsara bika sy mandeha izy io, hoy ny vadiko fa apetrakay ao anaty fitoeran-dakozianay. Rehefa lany ny faucet an-dakozia vaovao dia hosoloinay ny iray amin'izany fa tsy ny $ 490. iray (marika hafa) izay eo izao. Tianay izany, ny WOWOW Faucet.
*** G L2020-07-24
Nividy ity faucet ity ho solon'ny famatarana leaky 2 izay nifampiraharaha taminay. Mahafinaritra ity iray ity! Toa ny avo lenta ihany no azonao vidiana amin'ny fivarotana fitaovana fa amin'ny ampahany kely amin'ny vidiny. Nametraka azy ny vadiko. Nanana olana kely izahay rehefa nametraka, saingy heveriko fa olana momba ny filentehana manokana izay namboarina mora foana rehefa nanaratra hazo ny vadiko izay nanakana azy ireo ary nitazona ny faucet tsy hohenjanina tanteraka. Afa-po tanteraka amin'ny fividianana.
M *** ny2020-07-25
Ity faucet ity dia rivotra napetraka. Miasa tsara, ary tiako ilay fomba. Ny pataloha mainty dia malama ary manohitra ny fanontana - izay tiako satria natahotra aho sao ho hita eo ny zavatra kely rehetra. Ny hany zavatra iriko hananana ity faucet ity dia andriamby na zavatra iray hafa izay afaka manampy hisintona ilay faucet hiverina amin'ny toerany raha vantany vao vita ianao rehefa avy nampiasa ny fantsom-panafody. Mifanaraka tsara amin'ny toerany tsara fotsiny izy io fa mila manamboatra azy io amin'ny tanana indray. Ny faucet dia nanitsy milamina tsara hatrany amin'ny renirano mba hikosehana ho antsika hatreto. Tsy mbola nisy olana tafaporitsaka toa ny fanamarihana nataon'ny sasany tamin'ny hevitra (napetraka 1 volana lasa izay). Manana tsindry tsara lavitra noho ity farany ity isika noho ny farany. Tsy nampiasainay ny fiasa "fiatoana" - toa tsy misy dikany izany rehefa afaka mamono ny rano mora foana ianao, fa angamba heverin'ny hafa ho mahasoa izany. Amin'ny ankapobeny, fividianana lehibe.
Tonga haingana ny vokatra. Nataon'i Roto-Rooter nametraka azy io aho satria 23 taona ny tranoko ary mila olana momba ny fantson-tànana karakarain'ireo matihanina aho. Hay ny fantson-drano ihany no manana faucet mitovy. Nolazainy tamiko fa afa-po amin'izany izy. Tao anatin'izay andro vitsivitsy nampiasantsika azy dia mifanaraka tanteraka aminy aho. Tena afa-po koa izahay. Manoro hevitra an'ity zavatra ity aho raha mitady fanatsarana tsara miaraka amin'ny endri-javatra tena tsara.
L l ***2020-08-02
Tiako! Ilay faucet taloha izay naharitra OMG taona maro, farany tsy nahomby! Nojereko io fomba io ary fantatro fa tiako izany.
Nofidiko ity ary faly 100% aho. Miasa mora izy, mahery ny asan'ny tsifotra ary tonga lafatra ny fiasa mahazatra. Ny ampahany ratsy indrindra tamin'io dia ny famoahana ilay efa antitra, ny voanjo mahia lehibe dia nirongatra izaitsizy, ary amin'ny toerana tsy azo atao!
Faucet tena tsara. Tsara kalitao. Manantena aho fa handoa bebe kokoa amin'ny iray amin'ireo magazay fanatsarana trano lehibe. Faly be aho amin'ity fividianana ity. Ny fitsikerana ahy fotsiny dia tsy maintsy ataonao izay hahazoana antoka fa napetraka tsara ny loha raha vao esorinao io. Tsy mandeha ho azy amin'ny toerana tokony hisy azy io raha tsy misy fanovana kely. Tena ahiahy kely izany.
Ny tsindry rano dia tsara. Izy io dia manana safidy tsara sy safidy pause.
*** E E2020-08-11
Atao matanjaka. Tena mora ny mametraka. Manana olon-kafa maromaro izahay izay tsy nametraka na nanala tena mora ary misy fanaintainana lehibe hiaraha-miasa. Ity no mora indrindra. Gaga amin'ny hatsarany sy matanjaka ao aminy. Ny bokotra hiodina eo anelanelan'ny fiasan'ny rano samihafa dia somary malalaka. Mila somary teritery kokoa aho ka tsy nilatsaka mora foana teo anelanelan'ny fiasan'ny rano 2. Saingy amin'ny ankapobeny, tsara izany.
Tena nila fantsona vaovao aho satria nanapa-kevitra ny fantsom-pako 12 taona fa tonga ny mitete fa ny ratsy kokoa aza dia nilatsaka tao ambanin'ny fantsakana ihany koa. Niantso lehilahy mora raisina aho ary ny fanendrena azy hisokatra manaraka dia afaka 4 andro. Tsy manam-pahaizana momba ny faucets aho ka nandeha tamin'ny WOWOW ary nandidy ity faucet ity satria nisy famerenana be dia be ary nahagaga fa tsy lafo izany. Nanamarika i WOWOW fa ho tonga ato an-tranoko afaka roa andro dia tonga izany. Faly be aho amin'ity fividianana ity.
Ity faucet ity dia nanolo faucet mpanasitrana pullout iray tokana taloha. Namatotra ny fanoloana ny sprayer plastika sy ny fantsom-pifandraisana rehefa manomboka mitete izy ireo. Ity nikelikely nesorina nidina ity dia toa maoderina sy tsara tarehy eo am-pandriana an-dakozia an-dakozia vy! Vonona ny hametraka. Raha ny marina miaraka amin'ny fitarihako, ny zanako 2, 15 taona dia nanolo ny faucet ihany. Tsy afaka mandady ambanin'ny maimbo toy ny taloha aho afaka LOL Ny ampahany sarotra indrindra dia ny famoahana ilay faucet taloha…
Hatreto, tena faly amin'ity fividianana ity ary tena manoro hevitra aho!
Napetraka tao an-dakozako io faucet io! Hitan'ny vadiko izany ary tiany. Handeha hijery ny trano fiompiana izahay ary io indrindra no tadiavinay hametraka mora foana, tsy mila torolalana akory ianao. Tsy olona mora raisina aho fa fantatro !!! Naka ahy 30 minitra vao namoaka ny taloha ary nametraka ilay vaovao !!! Hividy iray hafa raha ilaiko izany !!! Fandefasana entana haingana koa
Tsy maintsy nosoloiko ny faucet lakozia Moen. Tsy mbola nividy faucet talohan'izay ary gaga tamin'ny vidiny! Nahita ny WOWOW ary tsara ny vidiny dia notifiriko izy io. Toa mahatalanjona izany, miasa tanteraka ary mieritreritra aho fa tsara kokoa ny tsindry rano. Ilay namako nametraka azy dia tsy nanana olana mihitsy.
J *** ny2020-09-16
Fitaovana fantsom-panafahana manaitra sy mora apetraka amin'ny fanaovana azy io. Tsy maintsy notapahiko niaraka tamin'ny fitaovana rotary ny faucet nitambatra nataoko rehefa niharatsy ny fifandraisana. Ny fivoriambe vaovao dia nandeha mora be tokoa satria ny fifandraisana natolotra dia voarindra tsara sy voadinika. Tena mamporisika an'ity entana ity ho an'izay te-hanolo ny faucet ao an-dakozia.
*** A D2020-09-11
Faucet tsara tarehy ity izay mifanaraka tsara ao an-dakozia. Nividy izany aho ho solon'ny faucet Moen 13 taona. Toa mora ny fametrahana azy, saingy tsy maintsy nijanona teo ny plumberako hametrahana azy noho ny tsy fahazoana miditra sy ny fahasarotana amin'ny fanesorana ilay faucet taloha. Nilaza izy fa nahagaga azy ary nametraka ny hafa amin'ity marika ity ihany koa. Tsy afaka miresaka amin'ny faharetana satria vao nametraka azy io aho, saingy fanatsarana azo antoka.
M *** S2020-09-23
Kalitao avo lenta, ny faritra rehetra dia voamarika tsara ho an'ny fifandraisana sy fivoriambe mora. Ny bolt lehibe fanampiny - apetaka ao ambanin'ilay fitoeran-drano (hahazoana antoka ny fantsom-baravarankely) dia nohatsaraina kokoa noho ireo bolt mahazatra taloha - mora apetraka amin'ny mpamily tanana sy visy. Ity no faucet dakozia voalohany napetrako; Ka raha afaka mametraka an'io mora foana aho dia misy afaka
Efa nametraka an'ity faucet ity izahay nandritra ny roa herinandro izao ary hatreto dia niasa lavorary. tsy nanana tsiro na tafaporitsaka na nanaratsy toa ny sasany amin'ireo tsikera ratsy izahay. Ny vadiko nametraka azy tao anatin'ny 30 minitra. Toa sy mahatsapa kalitao ambony izy io ary vidiny lafo raha ampitahaina amin'ny hafa. Faly be aho fa nividy an'ity! Manoro hevitra aho!
H l ***2020-10-01
Faucet tsara ho an'ny vidiny. Nampiasa faucet hafa lafo vidy kokoa aho taloha, fa ity kosa mandeha tsara !. Mahafeno tanteraka ny filako izany. Ny tsindry rano ao an-dakoako dia tena tsara lavitra noho ny nanoloana ny faucet taloha. Manoro hevitra mafy an'ity iray mahomby ity aho raha tsy mitady maodely deluxe izay ho 3 na 4 heny amin'ny vidiny.
Nanana olana tamin'ny fametrahana aho fa izany dia satria diso ny nilentako. Taorian'ny nahitako ny olana dia tsotra izany! Ny faucet vaovao dia tsara sy kanto! Faly be aho fa manana faucet avo lenta ary tsy mila mampiasa kaopy intsony hamenoana ny lapoaly avo amiko. Ny endri-javatra hisintona dia tsara koa!
Ity faucet ity dia 200 tapitrisa mahery tany amin'ny fitoeram-baravaran'ny trano sy menards! Misaotra anao nitahiry vola be !!
J l ***2020-10-10
Novidina ity ho fanavaozana ny fanavaozana ny lakozia, izay nanolo faucet 20 + yo. toy ny haavo mba hahafahanao mameno vilany lehibe ary manadio azy. ny fananana fivezivezena sy famafazana rehetra miaraka amina bokotra iray dia endri-javatra tsara, endrika vita amin'ny vy tsy voadio no tsara sy madio. Sarany lehibe amin'ny vidiny.
Fankarem-barotra WOWOW Gooseneck Faucet miaraka amin'ny fanongotana Sp ...
WOWOW borosy vy mifangaro mixer vita amin'ny lakozia - P ...